Ny 8 tsara indrindra ny kitapo lamba miloko mividy amin'ny 2018
Aza adino ny mitondra ireo kitapo mahagaga amin'ny dianao manaraka
Ny fanehoana an-tsehatra izay mampiavaka azy dia mahatonga azy ireo ho tena maro be toy ny kitapo na amin'ny fampiasana isan'andro. Azonao atao ny mandray azy ireo toy ny kitapo mitondra kitapom-batana mandritra ny faran'ny herinandro, ento miaraka amin'ny fitaovana fanatanjahantena izy ireo na mameno azy ireo amin'ny boky sy ny sekoly ambaratonga. Ny totozy natao tamin'ny tsy misy ny nilona dia nampiavaka ny rano sy ny ranon'orana, ary misy safidy maromaro azo alaina amin'ny teti-bola tsirairay. Ireto misy sombintsika sasany.
Ho an'ny lavaka vita tsara vita ary vita amin'ny farany ary mitazona zavatra maro, ny Baggalini dia safidy tsara indrindra. Ny totozy dia misy amin'ny loko 11 samihafa manomboka amin'ny magenta maingoka na poma mena mankany amin'ny fialan-tsasatra kokoa mpandala ny nentim-paharazana toy ny "java" mavokely na volokano saribao. Ny ivelany avy amin'ny toto dia manamboatra paosy kely, ripaka kely, tady roa ary basy iray entina miverina. Ao anatin'ilay efitrano feno, polyester dia misy karazana fandaminana mahasoa toy ny fantsom-paosy, penina, finday ary lamban-tsoavaly, ary koa akanjo matevina ho an'ny ordinatera miaraka amin'ny fikolokolo Velcro. Ny kitapo dia mirefy 12 metatra ny haavony ary manamboatra valizy ny fametahana valizy.
Ireo izay mikarakara teboka lehibe sy miavaka dia tokony hijery akaiky ny Zoress Waterproof Tote, kitapo tsara mba hitazonana ireo mpandehandeha izay miorina amin'ny làlana. Ny totozy dia tonga amin'ny loko efatra, tonon-tononkalo, dia marefo sy lamaody ary maika ny 18,89 inches malalaka amin'ny 11.02 inch ambony. Amin'ny andron'ny orana, esory ny elo ao amin'ny paosin-damba ivelany tsy misy fotony na ampiasao izany mba hahazoana tombontsoa sy handefa zavatra - dia mihidy izy. Ny ao anatiny dia entina miaraka amina paosy, anisan'izany ny iray ho an'ny finday, kitapo sy antontan-taratasy, ary misy kitapom-batony fanampiny ary ny mainty izay ampy tsara ho an'ny laptop. Ireo Amazon mpividy dia tia ny haben'ny kitapo kely ary ny tena maha-maivana azy.
Ho an'ny maivana, ho azo ampiasaina - nefa azo itokisana - manoloana ny vidin'ny vidin-tsarimihetsika dia safidy mahafinaritra ny Faltable Waterproof Travel Trust Bag. Ny kitapo dia lanjan'ny latsaky ny antsasa-tapitrisa dolara ary mirefy 18.9 x 12.6 x 6.4 inch, ary tsara indrindra ho toy ny kitapom-bidy na entana entana. Apetraho ao anaty kitapo izany alohan'ny dianao, hameno azy amin'ny tsioka ary mitondra azy ireo any an-trano mora foana. Vita amin'ny rano- sy ny ranon'amponganana tsy miloko sy ny zipo mafy mafy, ny aoriana dia manamboatra kitapo kely sy valizy kely, ka azo antoka fa azo antoka ho an'ny entana mivezivezy. Ny Truststag dia tonga mena, manga na marika mena.
Na manomboka any amin'ny toeram-pitsangatsanganana ho an'ny picnic na ny tora-pasika mandritra ny andro iray amin'ny masoandro, ity kitapo mena ity dia manana endrika mamirapiratra izay manampy ho an'ny andro mahafinaritra any ivelan'ny trano. Ny tavoahangy tsy misy rano dia tohadran-drano ary mirefy 20 x 16 x 7 santimetatra ary afaka manamboatra lamba tanana lehibe efatra ary zavatra vitsivitsy hafa ao amin'ny efitra fisakafoana. Ny tendron-tsoratry ny paosin-tadidy dia mihidy ary manasongadina ny palitao marevaka mba hiorina tsara amin'ny soroka, ary koa ny paosy roa ivelany any ivelany dia tonga lafatra amin'ny sunscreen, chapitick, smartphones ary zavatra hafa. Ny fonosin'ilay kitapo dia manana fanamafisam-peo mahaleotena ary afaka misakana 12 saka (na sns sy tavoahangin-drano).
Te-hijery ireo safidy hafa ve ianao? Jereo ny torolalana ho an'ireo kitapo mofomamy tsara indrindra .
Ho an'ny tokotany izay mahavariana dia ny kitapo kitapo Kitapo iray dia samy kitapo kitapo, kitapo kely ary kitapo fitaterana. Misaotra 12,6 x 18,5 x 5.1 santimetatra, ny tavoahangy zippered dia mety hahatsapa tsara ny laptop 17-inch ao amin'ny efitrano maintin'ny lamba, ary koa zavatra fanampiny ao amin'ny faritra roa anatiny. Ahitana loko fito samihafa ny kitapo, anisan'izany ny manga sy volomparatsina mainty sy mavokely ary manga sy volomparasy. Ny ivelany dia vita amin'ny tsy misy rano tsy misy rano ary manana fonosana ho an'ny smartphones sy zavatra hafa kely, ary koa podidin'ny tanana ho an'ny elo sy ny tavoahangin-drano ary maromaro maromaro izay mamela ny kitapo ho ampiasaina amin'ny kitapo, toto na lehibe kitapom-bola.
Ho an'ny toto iray izay miasa toy ny kitapo, kitapo, kitapo hafatra na entana, ny Kitapo Crest Design Shoulder dia safidy tsara sy azo atao. Niorina tamin'ny tsy misy rano ny rano, ny toto dia manana vary sy loko enina voafidy, manomboka amin'ny vanim-panafody miloko marika mankany amam-boninahitra mamiratra. Ny ivelany ivelany dia manana karazana paosy isan-karazany amin'ny fikarakarana, miaraka amin'ny paosiny kokoa ao anatiny ho an'ny laptop, pens, boribory ary finday. Ny kitapo lehibe dia mirefy 15 santimetatra lava, 11 metatra ny haavony, misy fanakambozon-keloka ho an'ny efitrano mainty, kitapo mena ary misy ramevatra marevaka sy mitondra trondro.
Raha toa ka tsy mieritreritra ny mamolavola bitika ho an'ny kalitao goavam-be, ny Victorinox Works Traveler 5.0 dia tena ilaina sy mahomby. Natao avy amin'ny lavaka misy loko, lavalava, ny toto dia misy amin'ny mainty mainty na menamena ary misy volon'aretina maitso na volomparasy. Ny fiheverana manan-danja dia ahitana kitapo mihemotra izay afaka mivadika any amin'ny valizy fanasan-damba iray (mba hikasika amin'ny fametahana fanodinana) ary hikirakirina ireo entana handefasana ny kitapo amin'ny soroka. Ny fikojakojana ny zavatra voalamina, dia misy karazana ivelany roa lehibe, fonosana fob ary fonosana anatiny efatra, ka ao anatin'izany ny roa tapa-tavoahangy ho an'ny eReaders sy ny tablette, ary koa ny pocket kely iray.
Ho an'ireo mila zavatra maharitra kokoa, ny kitapo fanatanjahantena Amolar dia manana fiheverana mandaitra izay afaka manohitra ireo entana mavesatra. Ny habeny lehibe lehibe 23 x 15 x 8 santimetatra ary maivana. Ny paosin'ny paosotra dia tsara ho an'ny tavoahangy sy akanjo mavo, manao izany ho safidy tsara ho an'ny mandeha na mandeha amin'ny gym. Ny Amolar dia afaka mihazona fitaovana marobe, noho izany dia manampy amin'ny fampihenana ny tsindry ny fitaovam-pandriana voarindra. Ny efitrano dia manana efi-pandrefesana ho an'ny fikambanana, raha ny paosiny eo anoloana ivelany kosa dia tsara indrindra ho an'ny solomaso, kitapo ary fanalahidy. Ny kitapo avo lenta dia vita avy amin'ny mainty mainty misy ravina mena sy matevina.
Famerenana: Minaal Carry-On 2.0 Sakafo
5 Mahagaga ny mampiasa kitapo maina amin'ny dianao manaraka
Fandefasana entana mandehandeha sy mangotrakotra
Inona no hitondrana an'i Azia
Safidy Great Backpack Options ho an'ny Dia manaraka
Ny lohahevitra 10 tsara indrindra amin'ny lanjany indrindra hividy amin'ny 2018
River of Time Museum any Fountain Hills, Arizona
Fankalazana ny trondro tany Eckert's Gardens
Fomba fiaingan'ny fitsangantsanganana
Toe-pisotroana manerana izao tontolo izao
Afaka milomano ao amin'ny Reniranon'i Mississippi any Nouvelle-Orléans?
Aiza i Elvis Presley no nandevina?
Ny Top 8 Things to Do in Bend, Oregon
Lalana amoron-dalana any London
Tondrozotran'ny faritry ny tany manerana ny Ranomasina Mena sy any Azia Atsimo